Yintoni Umfundi Oxeshanye NgesiKholeji?
Kubafundi nabazali Izifundo
Yintoni Umfundi Opheleleyo Kwangexesha?
Inkcazo ihluke esikolweni
Mhlawumbi uye wakuva amagama athi "umfundi wexesha elipheleleyo" kunye "nomfundi wexesha lesabelo" ngokubhekisele kubhaliso lwabafundi bekholeji. Kuyacaca ukuba abafundi bexesha elizeleyo baya esikolweni ngaphezu kwabafundi bexeshana, kodwa oko kuchaza oko kwahlukileyo kubini kwiziko. Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi i-qualification njengomfundi wexesha elipheleleyo esikolweni sakho, kubalulekile ukuba uyazi umda, kuba izinga lakho lokubhalisa linokubaluleka kakhulu.
Ukwabiwa kwexesha elipheleleyo
Ngomqondo oqhelekileyo, umfundi wexesha elizeleyo ungumfundi othabatha iiyunithi ezili-12, iikhredithi okanye iiyure ngekota kwiziko apho umthwalo wemfundo ephantsi iinqununu ezili-16, iikhredithi okanye iiyure.
Oku, ngokuqinisekileyo, yinkcazelo ngokubanzi. Iziko ngalinye libala iikrediti ngokuhlukileyo, ngakumbi ukuba zikwimizuzu yesine okanye semester. Abafundi bexesha elipheleleyo bahlala behlulwa nje ngokuba bathatha ngaphezulu kwesigamu somthwalo wenkcubeko yendabuko.
Ukuba ufuna ukungazi ukuba uyayichaza njengomfundi wexesha elizeleyo, kunjalo, kufuneka uhlole iikholeji okanye iyunivesithi. I-ofisi yombhalisi iya kuba neenkcukacha ezithile zeziko eziposwe kwi-intanethi. Ukuba akunjalo, nangona kunjalo, ukufowunelwa kwefowuni, i-imeyile okanye ukutyelela kungenziwa ngohlobo. Ukongezelela, ukuba ungumfundi onomzekelo, unomlinganiselo wokufunda, oko kubalulekile njengomthwalo wexesha elizeleyo ukuze uhlale uhlukile kunezinye abafundi.
Ezinye iindawo ziza kuba nencazelo yazo yinto yokuba isifundo sexesha elipheleleyo sithetha ntoni; abanye baya kuxhomekeka kuphela kwindlela ikholeji okanye iyunivesithi echaza ngayo. (I-IRS, umzekelo, ikwahlukanisa njengomfundi wexesha elipheleleyo ukuba "ubhalisile kwinani leeyure okanye iikhosi esizijonga njengexesha elipheleleyo.")
Ngokwenene, kufuneka ucele igunya elifanelekileyo malunga neemfuno zokubhalisa ixesha elizeleyo. Kubalulekile ukuba uyazi nokuba ngaba ungumfundi wexesha elipheleleyo, njengoko kunokuchaphazela ixesha lakho lokugqibela, phakathi kwezinye izinto.
Kutheni Ubhaliso bakho beemeko zobume bakho
Imimandla eyahlukeneyo yemfundo yakho inokuchaphazeleka ukuba ingaba ungayichazwa njengexesha elipheleleyo okanye i-part-time student.
Ukongezelela, unokumangaliswa ngendlela ofuneka ngayo ngokukhawuleza ukuba uqaphele ukubhaliswa kwakho. Ngokomzekelo, ukuyeka nje iklasi kungabakho umehluko phakathi kokuba ube ngumfundi wexesha elizeleyo kunye nomfundi wexeshana, ngoko uya kufuna ukukhangela umcebisi wakho wezemfundo okanye ofisi ye-registrar phambi kokuba uthathe naziphi na izenzo ezinokuchaphazela isimo sakho sokubhalisa .
Nazi ezinye izinto ezinokuthi zichaphazeleke nokuba ngaba ungumfundi wexesha elipheleleyo. Ukuba ungumdlali wezemidlalo, kufuneka wazi ukuba awufaneleki ukukhuphisana xa uwela ngaphantsi kwexesha lokubhalisa ixesha. Ii-premium kunye neerhafu zomshuwalense wemoto nazo zihambelana nesimo sakho njengomfundi. Mhlawumbi kubaluleke kakhulu, inkxaso yakho yemali kunye neengxowa-mboleko zabafundi banalo ubudlelwane nobhaliso bakho. Umzekelo, iimali-mboleko ezininzi zabafundi akudingeki zibuyiselwe uze uhlawule ngaphantsi kwexesha lexesha elizeleyo, ngoko qaphela ukuba ukunciphisa umthwalo wakho wekhosi kungathi ufanele uqalise ukwenza iintlawulo zemboleko zabantwana-into enqwenela ukuyijonga .
Indlela yokuLawula kwiKlasi
Iikholeji zeeKholeji zihluke njani kwiSikole esiphakeme?
Indlela yokwazi ootitshala bakho beKholeji
Ngaba Ndiya Kuhlawula Iincwadi ZikaKholeji zam?
Ngaba Ndifanele Ndiye Kwinqanaba Namhlanje? Nazi izizathu ezili-17
50 Ulwahlulo phakathi kweKholeji kunye neSikolo esiphakeme
Indlela Yokuhlala Ukhuthazwe Ekupheleni KweSemester
Ukusebenzisa iLibrari yeLogger - Indlela yokubhala imiyalezo yemiyalezo kwiRuby
Ubungakanani beRC Engine Size?
10 IiCopper Facts
UPetronilla: Funda ngeSibongiseni eliLwazi lika-Eleanor wase-Aquitaine
Ngaba i-Trash Fish (iTarbage Fish) Efanelekileyo Ukutya?
Iimpawu eziMnandi kwiBomi ezikufundisayo ukuba ukhanyise
Iikholeji zeeKholeji kunye neeNqweno zokuQala zikaJulayi
Ukuvavanywa kweSikolo kuVavanya ulwazi loNcedo kunye neZithuba
I-Whittier i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Inkcazo yekota "iMagnum" kwiibhulophu zokudubula
Yintoni Inqaku Lokulumkisa?
Ijele elidala kunazo zonke laseSan Quentin - California
Imfazwe Yehlabathi I: I-RAF SE5
Iinqununu ezintlanu zokwazi malunga neGesi yendalo
Idama leGorge ezintathu